Android Photo ndabere: Ndabere Photo ka Google + na kọmputa Mfe k
Android Photo ndabere: Ndabere Photo ka Google + na Computer Mfe
Were nza nke photos na gị Android ekwentị na chọrọ ịnọgide na ha na-echeta? Ọ bụ adịghị ize ndụ na-echekwa foto na Android ekwentị, dị ka ị nwere ike ihichapụ ha site na mberede ma ọ bụ na-esi gị Android ekwentị-efu? Ọ bụrụ na dị ka nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na nkwado ndabere na mpaghara foto na Android ekwentị. Isiokwu a na-elekwasị anya na-egosi gị otú ị ndabere foto na Android enweghị ihe ọ bụla hassle.
Method 1. ndabere Android Photos ka Google + akpaghị aka Method 2. ndabere Foto ndị dị na Android na iji eriri USB Iji aka Method 3. ndabere Android Photos ka Computer na MobileGo
Method 1. ndabere Android Photos ka Google + akpaghị aka
Plan nkwado ndabere na mpaghara foto gị Android ekwentị Google +, n'ihi ya, ị nwere ike mfe ịkọrọ ha na gị ezinụlọ na ndị enyi? Soro mfe nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Gaa Google Play Echekwala na ibudata ma wụnye Google + ngwa na gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 2. Run Google + na gị Android ekwentị. Kpatụ NchNhr icon iji bugote Setting menu.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Ntọala ma họrọ Igwefoto & photos. Mgbe ahụ, enweta Auto ndabere p.
Nzọụkwụ 4. Gbanwuo Auto ndabere na ịtọ gị chọrọ nhọrọ. Mgbe ahụ, ndabere photos i ẹka Google +.
Method 2. ndabere Foto ndị dị na Android na iji eriri USB Iji aka
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ndabere foto ndị si Android na kọmputa na-na-adịghị na iji ihe ọ bụla ngwá ọrụ, ebe a bụ ụzọ maka gị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ekwentị na kọmputa na iji eriri USB. Ugbu a, gị Android ekwentị ndokwasa dị ka ihe mpụga ike mbanye.
Nzọụkwụ 2. On kọmputa gị, chọta mpụga ike mbanye nke gị Android ekwentị. Imeghe ya.
Nzọụkwụ 3. The ndabere igwefoto foto na-echekwa na DCIM nchekwa. Photos dị site na kọmputa na-echekwara na nchekwa aha foto ma ọ bụ ihe dị ka na. Ọ bụrụ na ị na-eji ụfọdụ ngwa ibudata ma ọ bụ na-photos, ị chọrọ ịga ndị a nchekwa ma na-achọta foto na ha.
Nzọụkwụ 4. Open foto nchekwa otu otu na Detuo gị chọrọ n'anya. Mgbe ahụ, ndabere Android igwefoto photos na ndị ọzọ gị na kọmputa.
Method 3. ndabere Android Photos ka Computer na MobileGo
Gị eriri USB gbajiri, otú i nwere ike bụghị ndabere foto site na Android? Echefu nchekwa ebe foto gị na-azọpụta, otú i nwere iji ihe ka ukwuu oge ka dị ịchọ? Jiri ya nwayọọ. E nwere ụfọdụ bara uru ngwaọrụ nke na-enye gị mfe ịnweta niile Android photos nchekwa na mgbe ahụ akwado Android photos.
Ọ bụ ihe niile-na-otu Android ndabere ngwá ọrụ, ime ka ị ndabere photos, kọntaktị, ozi, ngwa, ngwa data, music, video, kalenda, oku na ndekọ na akwụkwọ enweghị ihe ọ bụla hassle.
Ndabere Android photos i weere, ibudatara na dị site WiFi ma ọ bụ eriri USB.
Weghachi foto Android ekwentị na-enweghị a ikedo.
Ọzọkwa ndabere na weghachite kọntaktsị, SMS, na ngwa na-eji ngwa data, media, akwụkwọ, na kalenda na oku na ndekọ.
Dakọtara na Samsung, HTC, LG, Motorola, Sony, Google, Acer, Huawei, ZTE, na ndị ọzọ.
Rịba ama: The Mac version anaghị akwado Ichekwa ndabere na Iweghachi na ngwa, ngwa data, media na akwụkwọ n'ihi na oge ịbụ
Nzọụkwụ 1. Wụnye ngwá ọrụ na kọmputa na-esi na gị Android ekwentị ejikọrọ
Ka malitere, awụnyere na-agba ọsọ ahụ Wondershare MobileGo na kọmputa. Wepụ a eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-eji Windows version, ị nwekwara ike gbalịa WiFi njikọ.
Mgbe ejikọrọ, gị Android ekwentị ga-gosiri na isi na windo na photos na ndị ọzọ faịlụ categorized na ekpe sidebar.
Cheta na: Iji jiri WiFi njikọ, ị chọrọ iji aka wụnye Wondershare MobileGo ngwa na gị Android ekwentị. Mụta ihe banyere Wondershare MobileGo ngwa >>
Nzọụkwụ 2. ndabere foto niile si gam akporo ekwentị na kọmputa na 1 click
Ke akpan window, pịa One-Click ndabere. Nke a na-elu Back Up window. Site ndabara, niile data i nwere ike na nkwado ndabere na 1 click na-depụtara n'ebe ahụ. Tinye akà rà Photos ma ọ bụla ọzọ data ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara na. Gbaa mbọ hụ na ebe ebe ndabere faịlụ ga-adị. Mgbe ahụ, pịa Back Up. Ke ofụri ndabere usoro, ọ bụghị ịkwụpụ gị Android ekwentị. Mgbe ọ na-agwụ agwụ, pịa OK ma ọ bụ Open nchekwa.
Nzọụkwụ 3. selectively ndabere foto na Android ekwentị
Nkwado ndabere na mpaghara họrọ Android photos, ị nwere ike ịnyagharịa ekpe sidebar na pịa obere triangle esote Photos. All foto nchekwa na gị Android ekwentị ga-gosiri na Photo ndekọ osisi.
Mepee a foto na nchekwa ma họrọ gị chọrọ photos. Pịa Export. Nke a na-elu kọmputa faịlụ nchọgharị window. Chọta a ọnọdụ ka zọpụta ndị a photos na pịa OK. Mgbe ọ bụ zuru ezu, pịa Nso ma ọ bụ Open nchekwa.
Top 6 Android App Manager maka Ị
Top 5 Android ebe nchekwa Managers maka Ị
> Resource> Android> Android Photo ndabere: Ndabere Photo ka Google + na kọmputa Mfe